Fotodrafitrasa fototra : Mitohy ny asa fampandrosoana ny tanànan’i Toliara
Araka ny efa nambaran’ny Filoham-pirenena ombieny ombieny dia ny tanànan’i Toliara no atao fitaratra amin’ny fampandrosoana. Izany hoe fampandrosoana miainga eny ifotony. Ao anatin’izay indrindra dia mitohy ny asa entina hampandrosoana ny tanànan’i Toliara. Tafiditra …Tohiny
Analamahitsy : Toerana fampiadiana akoho mampitaraina ny olona
Mampimenomenona ny mponina eny Analamahitsy ambany Andrefana ny fisiana kianja iray fampiadiana akoho eny amin’ny “Parc et Jardin” eny an-toerana. Ankoatra ny tabataba sy ny korontana aterak’izany isaka ny alahady mantsy, dia nambaran’ireo olona izay …Tohiny
Toamasina : Tranon-dopy 36 sy fiara 04 may kila forehitra
Nitrangana famaizana goavana indray tao amin’ny “Gare routière” Tanambao V Toamasina omaly alakamisy tokony ho tamin’ny 05 ora sy 13 minitra maraina. Tranon-dopy miisa enina izay nahitana efitra miisa enina ambin’ny telopolo sy fiara efatra …Tohiny
Jumbo Smart Tanjombato : Nisy nametraka baomba tao amin’ny trano fivoahana
Nahitana baomba vita tanana natao tanaty baoritra mainty teny amin’ny trano fivoahana teny amin’ny Jumbo Smart Tanjombato omaly tokony ho tamin’ny 06 ora hariva tany ho any. Tsy fantatra ny olona nametraka io fitaovana mety …Tohiny
Hita eto Madagasikara avokoa izay zavatra rehetra mahamenatra tsy misy manerana izao tontolo izao. Tranga iray amin’izany ohatra ny filatsahan’i Andry Rajoelina, mpanongam-panjakana ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena… Rafi-pitsarana Voasoratra ao anatin’ny « accord de Cotonou » ...Tohiny